कोडक यसको आफ्नै KODAKCoin cryptocurrency सुरूवात गर्न ग्याजेट समाचार
२०१pt मा क्रिप्टोकुरेन्सीहरू र उनीहरूको बजार मुख्य पात्रहरू मध्ये एक हो। केहि चीज जुन २०१ 2018 मा पनि दोहोरिएको देखिन्छ। थप रूपमा, हामी देख्छौं कति कम्पनीहरू यस प्रवृत्तिमा सामेल भइरहेका छन्। यो घोषित गर्न अन्तिम अन्तिम कोडक हो। तिनीहरूले blockchain तरंग सवारी गर्ने निर्णय गरेका छन्। तसर्थ, तिनीहरू आफ्नो सुरूवात घोषणा आफ्नै cryptocurrency KODAKCoin.
यो एक छ फोटोग्राफी केंद्रित क्रिप्टोकरन्सी। यो फोटोग्राफरहरू र एजेन्सीहरूलाई मद्दत गर्ने उद्देश्यको साथ जन्म भएको हो छवि अधिकारहरूको व्यवस्थापनमा अधिक नियन्त्रण। तसर्थ, तिनीहरू पनि मञ्च प्रस्तुत कोडाकोन। यसको लागि धन्यबाद, छवि अधिकारहरू अधिक सजीलो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।
कोडकले यस नयाँ साहसिक कार्यका लागि वेन डिजिटलसँग साझेदारी गरेका छन्। यो एक कम्पनी हो कि यी प्रकारको समाधानहरू विकास गर्नमा माहिर छ। यो सबै सुरु गर्ने ICO जनवरी on१ मा आयोजित गरिनेछ। बजारमा अचम्मको कारण र कोडाक सेयर 44 XNUMX% सम्म बढेको छ भन्ने खबर छ।
KODAKOne blockchain प्रयोग गर्दछ र एक ईन्क्रिप्टेड र डिजिटल फोटोग्राफिक प्लेटफर्म हो। फोटोग्राफरहरू यसमा दर्ता गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यहाँ तिनीहरूले दर्ता गर्न र यसमा आफ्नै फोटाहरू लाइसेन्स गर्न सक्दछन्। थप, तपाइँको काम बेच्न को लागी भुक्तान तुरून्त KODAKCoins मा गरिनेछ। त्यसोभए तिनीहरूले पैसा प्राप्त गर्न महिनाको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्दैन।
साथै, यस प्ल्याटफर्मले वेबको ट्र्याक गर्दछ यी छविहरूको उपयोग लाई सुरक्षित गर्नका लागि प्लेटफर्ममा दर्ता गरियो। के तिनीहरूले टिप्पणी गरेको छैन के हो तिनीहरूले दुरुपयोग पत्ता लाग्दा के गर्न जाँदैछन्। त्यसोभए यो प्राप्त गर्न कम्पनीको दिमागमा के कस्ता उपायहरू छन् भनेर हेर्न रोचक हुनेछ।
कोडक क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमा प्रवेश गर्न कटिबद्ध देखिन्छ। कम्पनीले एक धेरै विस्तृत र विस्तृत योजना पेश गरेको छ। त्यसोभए उनीहरूले यो स्पष्ट पार्दछ कि उनीहरू ब्ल्फिंग छैनन् र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू छन्। यस परियोजना को ICO जनवरी 31 मा आयोजित गरिनेछ। त्यसकारण यस मितिबाट यस परियोजनाको पहिलो टोकनहरू खरीद गर्न सकिन्छ। यो नयाँ परियोजना कसरी कम्पनीको लागि बाहिर जान्छ भनेर देख्न रोचक हुनेछ। तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » कोडकको आफ्नै क्रिप्टोकरन्सी हुनेछ